Anti-human Trafficking Legal-aid program - The Fifth Pillar
April 30, 2020 July 3, 2020 admin	0 Comments
The Fifth Pillar is implementing an Anti-human Trafficking Awareness program in Yangon division and eastern Shan state funded by USAID. TFP offers consultations and supports regarding human trafficking cases and safe migrations.
Contact us through thefifthpillar.tfp@gmail.com or The Fifth Pillar Facebook Page chat box https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp or TFP help-line 09755995787 (Yangon), 09755995797 (Tachileik)
TFP သည် “လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ဥပဒေအသိပညာတိုးမြှင့်ရေး” စီမံကိန်းတစ်ခုကို USAID ၏ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
လူကုန်ကူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရွေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် အကြံဉာဏ်များ၊ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်ရန် TFP မှ အဆင့်သင့်ရှိနေကြပါသည်။
TFP သို့ ဆက်သွယ်လိုပါက TFP ၏ Facebook Chat Box မှ သော်လည်းကောင်း TFP Help-line မှ သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။The Fifth Pillar Help-line 09755995787 (ရန်ကုန်), 09755995797 (တာချီလိတ်)
← Organization Diagram